Warbixinno luuqado kala duwan lagu bixineyo nidaamka howlgabka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Pensionsmyndigheten informerar på åtta olika språk i Stockholm, Göteborg och Malmö. Foto: Kapi/Pensionsmyndigheten.
Warbixinno luuqado kala duwan lagu bixineyo nidaamka howlgabka
Ajnabi badan ayaan ka heysan fikir
La daabacay fredag 14 november 2014 kl 14.30
Hayadda dalkan u qaabil-san howlaha howl-gabka ayaa xoogga isugu geeysay sidii luuqaddooda hooyo loogu war-gelin lahaa ajaaniibta dalkan ku sugan. War-bixinnada la xiriira gunnada howl-gabka oo la sheegyay in aaney macluumaad fiican ka hey-san, sida uu sheegay Sten Eriksson, ahna madaxa laanta xiriirka ee hayadda howl-gabka:
- Isku celcelin ayey dadyoowga dalka dibaddiisa ku dhashey saami u helaan dhaqaale howl-gab oo aad u hooseeya, maadaama ey dalka muddo ku gaaban ku sugnaayeen, isla-markaana shaqa-la'aantu kaga badan tahay. Isku soo wada duub waxaa la oran karaa in dadyoowgaasi ey qarka u saaran yihiin iney mustaqbalka helaan dhaqaale howl-gab oo liita, sidaa daraadeed ayey muhiimad ugu leeyihiin hayadda gunnadda howl-gabka sidii war-bixin looga siin lahaa.
Hayadda ayaa howlahaa sannadka ku maal-gelineysa dhaqaale gaarsiisan laba jibbaar dhaqaalihii ey howlahan u isticmaashay sanadkii tagay 3,7 malyan oo koron, halka sannadkii tagay ay gaarsiisnayd 1,8 malyan oo koronka Iswiidhishka.
Cambara Xuseen oo baratay culuunta dhaqaalaha iyo xiriirka waxay ka howl-galeeysay labadii sannadood ee ugu dambeeyey shirkad ku howl-gasha waxa loo yaqaanno Mångakulturell kommunikation - la xiriirka qowmiyadaha kala duwan. Shirkaddaasina oo ay hayadda howlaha gunnada howl-gabku u xil-saartay sidii ey ku howl-gelin lahayd dadyoow ku hadlo luuqado kala duwan oo ka mid ah luuqadaha ey ku hadlaan qaar ka mid ah qowmiyadaha dalkan ku dhaqan oo hayaddu u aragtay iney baahi ballaaran u qabaan macluumaadka la xiriira gunnada howl-gabka, sida ay idaacadda Radio Sweden u sheegtay Cambaro Xuseen.
Mashruucan oo socon doona muddo shan toddobaad ayaa gunta laga leeyahay tahay sidii bulshada aan ku ciil bixi karin luuqadda iswiidhishka loo gaarsiin lahaa macluumaad la xiriira gunnada howl-gabka iyadoona lagu gaareyo iney xaafadaha ajaaniibtu ku badan yihiin ey si jadwaleey-san looga howl-geliyo shaqaale saacadeey-san oo soomaali ey ka mid tahay.
Shaqaalahan ayaa howl-gelintoodu ey hor-dhac u ahayd in qudhooda la siiyo aqoon kororsi laba saacadood socday si kor loogu qaado aqoontooda la xiriirta nidaamka gunnada howl-gabka, sida ay Radio Sweden u sheegtay Banaz Abdulla mar ay ku sugneeyd xarunta tareenka ee xaafadda Fitja oo ey ka howl-galeeysay:
- Wuxuu ahaa aqoon kororsi gaaban oo aasaas ah. Midkaasina oo ku saabsanaa, habkee ayaan u shqeeyn doonnaa?, habkee ayaan bulshada u siin doonnaa war-bixinta?. Waxaan ka korosaday waxyaabo badan oo aanan horay ula socon qudheeydu.
Muddo toddobaad ah oo ey magaalada Stockholm ka howl-geleyeen 10 ruux oo ka mid ah 23-ka war-geliyeyaal ayay sheegtay Banaz Abdulla in xaafadaha qaarkood ey dadyoowga war-bixinta ey siinayeen u badnaayeen Iswiidhish. Wana mid aaney fileeyn, maadaama ay u heeysatay in bulshada iswiidhishku ka dhereg-san yihiin gunnada howl-gabka:
- Waxaa la moodaa, waa dad iswiidhish ah, dalkoodii ayey joogaan oo waa ey helaan war-binnada, isla-markaana ey dabooli karaan baahidooda. Waa mid iga yaabisay oo aana fileeyn, sida ay sheegtay Banaz Abdulla oo ka mid ah howl-wadeennada 10-ka ah ee ku howlan ku war-gelinta ajaaniibta ee gunnada howl-gabka.
Dhanka kale Cambara Xuseen oo ah maamulaha mashruucan ee shirkadda ey hayadda howlaha howl-gabku u xil-saartay sidii ey u fulin lahayd ayaa iyaduna sheegtay iney jiraan dadyoow badan oo ajaaniib ah, una baahan war-bixinnada noocan oo kale ah.
Mashruucan ayaa dhanka kale dhaliyay dood la xiriirta inay hayadda gunnada howl-gabku aaney ka soo bixin howlihii loo xiil-saarey ee la xiriirey ku war-gelinta qowmiyadaha ku hadla shanta luuqadood ee loo aqoon-san yahay dalkan, luuqadaha laga tirada badan yahay. Iyo sidoo kale in aaney ka mid aheyn luuqadaha lagu bixineyo war-bixinnada. Hase yeeshee uu madaxa laanta xiriirka ee hayaddu ku macneeyay doorashada luuqadahan siddeeda ah sida:
- Waa aragti ku saleeysan baahida loo qabo war-bixinta gunnada howl-gabka oo aannu dejiney. Halkaasoo ey nooga muuqato jiritaanka kooxo aan sidii looga baahnaa ula qab-san bulshada iswiidhishka oo ey ku dhaqan yihiin, sida uu sheegay Sten Eriksson, ahna madaxa laanta xiriirka ee hayadda howl-gabka.